यसरी फसाइन्छ बैंकरलाई (धितो मूल्याङकन गर्नेहरुको भित्रि कथा) ~ Banking Khabar
यसरी फसाइन्छ बैंकरलाई (धितो मूल्याङकन गर्नेहरुको भित्रि कथा)
बैंकिङ खबर । बैंकिङ कसुरमा प्रहरीले बिहीबार ६ जनालाई पक्राउ गरयो । जसमा धितो मुल्याङन गर्ने अधिकारी अर्थात इन्जीनियर पनि परे । राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा देखाएर खोलाको बगर धितो राखी ठगी गर्ने यी व्यक्तिहरुको पक्राउ पछि धितो मूल्याङकन गर्ने व्यक्तिको आचरण बाहिर आयो । बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी वा बैंकरलाई फसाउने काम धितो मूल्याङकन गर्ने व्यक्तिहरुबाट भएका छन् भन्ने उदाहरण मात्रै हो यो । सुनसरी इटहरीका एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीका इञ्जिनियर भेषराज खत्री, मोरङ बेलबारी–३ का इञ्जिनीयर कर्ण चामलिङ तथा स्वर्णिम एण्ड श्रीजन कम्पनी यसका उदाहरण मात्रै हुन् । जव कि उनीहरुले नक्कली कागज बनाएर बैंकबाट रु ४ करोड ६० लाख कर्जा निकाल्ने काम गरे । हाल उनीहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
धितो मूल्याङकन गर्ने इन्जीनियरहरु नै खराव
जग्गाको धितो मूल्याङन गर्ने कैयौं इन्जीनियरहरुले हदैसम्म गर्ने गरेका छन् । बैंकबाट कर्जा निकाल्न बाध्य हुने अबस्था आएका व्यक्तिहरुले आफ्नो जग्गा, सम्पत्ति धितो राख्ने गर्दछन् । त्यस अबस्थामा बैंकले आबश्यक डकुमेन्ट तयार गर्ने क्रममा एक इन्जीनियरिङ कम्पनीलाई मूल्याङ्कनको लागि जिम्मेवारी दिन्छ । तत्पश्चात ‘फिल्ड भिजिट’ गर्नका लागि इन्जीनियर अघि सर्दछन् । इन्जीनियरले मूल्याङ्कनका लागि रिपोर्ट बनाउनुपूर्व सम्पत्तिवाला अर्थात कर्जा आबश्यक भएको व्यक्तिलाई तपाईको धितो के कस्तो छ ? भनेर फोन गर्दछन् । अनि फोनमै बार्केनिङ गरेर मूल्याङकन गर्ने अधिकार आफूलाई भएको र त्यसको मूल्याङकन आफूले चाहे जति पनि गर्न सक्ने बताउँछन् । तत्पश्चात केही रकम खर्च हुने र त्यो रकम बैंकका कर्मचारीलाई समेत दिनुपर्ने भन्दा पैसा माग्छन् । यदी कुरा मिलेन भने धितोको मूल्याङकन छैन भनेर बैंकलाई समेत खबर गर्न भ्याउँछन् ।
घर जग्गा मूल्याङकन गर्ने काममा बैंकका शाखा प्रमुखसँग साँठगाँठ बढाउँछन् । कर्जा आबश्यक भएको व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँछन् । त्यसपछि कर्जा माग्ने व्यक्तिको आबश्यकतालाई बुझ्नतर्फ लाग्छन् । घर जग्गा वा अन्य सम्पत्ति कति के के छ ? कस्तो छ ? भनेर बुझ्ने काम गर्छन् । कर्जा किन निकाल्न लागेको ? कति रकम आबश्यक भएको ? भनेर सोधखोज गर्छन् । त्यसपछि व्यक्तिलाई सिधै तपाईको सम्पत्तिको त मूल्याङन नै छैन, त्यति धेरै रकम निकाल्न मिल्दैन भनेर खबर गर्छन् । अनि घुमाउरो ढंगबाट पछि सम्पर्क गरौला नि है भनेर सम्पत्ति मूल्याङकन गर्नबाट आलटाल गर्छन् । त्यसभन्दा अगाडि फिल्ड भिजिटको रकम भने बुझिसकेका हुन्छन् ।
फिल्ड भिजिट मात्रै गर्ने
केही इन्जिनियरहरु यस्ता सम्म छन् धितो मूल्याङकनको लागि भन्दै फिल्ड भिजिट बाटै धेरै रकम असुल्छन् । फिल्ड भिजिट गरेको मात्रै ३ हजार देखि पाँच हजारसम्म लिन्छु धितो हेरेको मात्रै भनेर फिल्ड भिजिट गर्छन् । फिल्ड भिजिट गर्ने क्रममा कर्जा आबश्यक भएको व्यक्तिको आनीबानी पत्ता लगाउँछन् । कर्जा कति आबश्यक परेको ? किन कर्जा निकाल्न चाहेको ? सबै कुरा बुझ्ने गर्दछन् । तत्पश्चात फिल्ड भिजिटको रकम बुझेपछि धितो मूल्याङकन गर्ने कुरामा केही रकम हात पार्न सकिने अबस्था हेरेर धितो मुल्याङकन गर्छन् अनि फाइल बैंकमा पठाउँछन् । अन्यथा आफूले चाहेको रकम नआउने अबस्था देखियो भने धितो कम्जोर छ भनेर टाढिन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरुले बैंकको शाखा प्रमुखलाई समेत रिजाउने काम गर्दछन् ।
बास्तविक धितो मूल्याङकन हुँदैन
धितो मूल्याङकन गर्ने व्यक्तिहरु अध्ययन गरेर सम्वन्धित विषयमा लाइसेन्स लिएर इन्जीनियरिङ काम गरेका हुछन् । तर उनीहरुमध्य सबैको नियत ठीक हुँदैन । उनीहरुले बैंकबाट मासिक वा बार्षिक रुपमा लिने रकमका अतिरिक्त फिल्ड भिजिटबाट रकम लिन्छन् । फिल्ड भिजिटको रकम व्यक्ति अर्थात कर्जा लिने व्यक्तिसँगै लिन्छन् । यस्तो अबस्थामा कतिपय बेला बैंककै व्यक्तिले बढी मूल्याङकन गर्न लगाउने, कतिपय अबस्थामा कर्जा आबश्यक भएको व्यक्ति स्वयमले बढी मूल्याङकन गर्न लगाउने र केही रकमको प्रलोभन देखाउने गर्दछन् । यही अबस्था बढ्दै गएपछि मूल्याङकन गर्नेहरुले सहि मूल्याङकन गदैनन् । कि उनीहरु पन्छिन्छन् कि रकम असुलेर काम गर्दछन् ।
अन्त्यमा सिइओ फसाउने काम
यी र यस्तै केही पात्रका कारण बैकरहरु बैंकिङ कसुरमा मुछिने गरेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफैले सम्पत्ति मूल्याङकन गर्ने कुरा हुँदैन । कर्मचारी मार्फत नै गर्नुपर्छ । कर्मचारी पनि सबैले सहि ढंगले काम गरिँदिँदैनन् । मूल्याङकन गर्ने इन्जीनियरलाई बैंक कर्मचारीले विश्वास गर्दा इन्जीनियरले कर्जा आबश्यक पर्ने व्यक्तिसँग रकम असुल गरीसकेको हुन्छ । जुन कुरा बैंकलाई नै थाहा हुँदैन । जग्गा, घर मूल्याङकन गरेर कर्जा निकाल्ने अधिकाँस व्यक्तिले यो समस्या झेलेको हुन्छ । खराव नियत भएका इन्जीनियरले यतिसम्म गर्न भ्याउँछन् बैंकलाई अर्कै जग्गा देखाएर फर्जि कागजपत्र तयार गरी कर्जा निकाल्ने काममा सहयोग गर्ने र वास्तविक मूल्याङकन नगर्ने । जसका कारण अन्तमा घटना लुक्दैन बैंकरलाईनै यस्ता घटनाले जेल पुराउँछ । यसअर्थ धितो मूल्याङकन गराउँदा सम्पत्ति भएको व्यक्ति र बैंकरले बढी सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ ।